ကိုလံဘီယာကို မရှုံးဖူးသေးတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်း ဆက်ထိန်းဖို့ကြိုးပမ်းရမယ့် အင်္ဂလန်
3 Jul 2018 . 3:42 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်(၂)ပွဲဖြစ်တဲ့ ဆွီဒင်-ဆွစ်ဇာလန်၊ အင်္ဂလန်-ကိုလံဘီယာပွဲတွေကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ပွဲက အနိုင်ရတဲ့နှစ်သင်း ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဆုံတွေ့မှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်အသင်းတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ . . .
ဆွီဒင် နှင့် ဆွစ်ဇာလန် (၃-၇-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
အုပ်စု(F)မှာ ဂျာမနီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အုပ်စုဗိုလ်နဲ့ ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့ ဆွီဒင်အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က လေးစားစရာပါပဲ။ တစ်ဦးကောင်းထက် Team Work ကောင်းကောင်းနဲ့ ကစားတတ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်း၊ စိတ်ဓာတ်ကလည်း မာကျောမှုအပြည့်ပါပဲ။ တိုက်စစ်က ၀ါရင့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ်ဘတ်ဂ် Marcus Berg ၊ တွိုင်ဗိုနန် Toivonen တို့ဟာ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်နဲ့ နောက်တန်းမှာလည်း ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်၊ ဆားဘီးယား၊ ကော်စတာရီကာတို့လို အသင်းတွေနဲ့ အုပ်စုကျပ်ထဲကျရောက်ခဲ့ပြီး ဒီအဆင့်အထိရောက်လာတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကိုလည်း အထင်သေးလို့မရပါဘူး။ အုပ်စုတွင်းမှာ ဘရာဇီးလ်လိုအသင်းမျိုးကို သရေကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါမစ် Drmic ၊ ရှာကီရီ Shaqiri ၊ ချာကာ Xhaka တို့လို ကစားသမားတွေအပြင် ဒီဇီမယ်လီ Džemaili ၊ ဘရာမီ Behrami စတဲ့ ၀ါရင့်ကစားသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှု၊ ခြေစွမ်းပိုင်းက ကွာခြားချက်မရှိလို့ အနိုင်၊အရှုံးခန့်မှန်းဖို့ ခက်တယ်။ မိနစ်(၉၀)အတွင်း အဖြေပေါ်ဖို့ မရှိဘဲ အချိန်ပို၊ ပယ်နယ်တီအထိရောက်သွားနိုင်ပြီး စိတ်ကြိုက်အသင်းဆိုရင်တော့ ဆွစ်ဇာလန်ကိုပဲ ကြိုက်တယ်။
ကိုလံဘီယာ နှင့် အင်္ဂလန် (၄-၇-၂၀၁၈ နံနက် ၁၂း၃၀)
အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစွမ်းက အားရစရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အုပ်စုတွင်းမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံတစ်သင်းသာ ပြိုင်ဘက်ကောင်းပါလို့ အခုပွဲက အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းအစစ်အမှန်ကို စမ်းသပ်မယ့်ပွဲလို့ ဆိုရမယ်။ ကိုလံဘီယာအသင်းကတော့ အုပ်စုတွင်းမှာ ဂျပန်ကို မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးခဲ့တာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နှစ်ပွဲမှာ ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ပိုလန်၊ ဆီနီဂေါတို့ကို အနိုင်ကစားခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ ကိုလံဘီယာအသင်းတို့ဟာ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက အုပ်စုတွင်းမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး အင်္ဂလန်က (၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်သင်း (၁၃)နှစ်အကြာမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်တွေ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခြေစမ်းပွဲတုန်းကလည်း အင်္ဂလန်အသင်းကပဲ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ စုစုပေါင်းဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့(၅)ကြိမ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းက (၃)ပွဲနိုင်၊ (၂)ပွဲသရေကျခဲ့ပြီး Head To Head မှတ်တမ်းမှာတော့ အပြတ်အသတ် အသာယူထားတယ်။ ဒီနှစ်သင်းဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပွဲတွေက ခြေစွမ်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သိသိသာသာ ကွာခြားချက်မရှိဘူး။ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုမှာလည်း ဘက်ညီတယ်လို့ဆိုရမယ်။ အရင်တုန်းက အင်္ဂလန်အသင်းလို နာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့ တစ်ဦးကောင်းကစားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လူငယ်ကစားသမားတွေကို အခြေခံပြီး Team Work ကို ဦးစားပေးထားတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်သွားမယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ကိုလံဘီယာကို မရှုံးဖူးသေးတဲ့ မှတျတမျးကောငျး ဆကျထိနျးဖို့ကွိုးပမျးရမယျ့ အင်ျဂလနျ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ရဲ့ နောကျဆုံးပှဲစဉျ(၂)ပှဲဖွဈတဲ့ ဆှီဒငျ-ဆှဈဇာလနျ၊ အင်ျဂလနျ-ကိုလံဘီယာပှဲတှကေို ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈပှဲက အနိုငျရတဲ့နှဈသငျး ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ဆုံတှမှေ့ာဖွဈတာကွောငျ့ ဘယျအသငျးတှေ ထိပျတိုကျတှမေ့လဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ . . .
ဆှီဒငျ နှငျ့ ဆှဈဇာလနျ (၃-၇-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
အုပျစု(F)မှာ ဂြာမနီကို ကြျောဖွတျပွီး အုပျစုဗိုလျနဲ့ ဒီအဆငျ့ကိုရောကျလာတဲ့ ဆှီဒငျအသငျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက လေးစားစရာပါပဲ။ တဈဦးကောငျးထကျ Team Work ကောငျးကောငျးနဲ့ ကစားတတျတဲ့အသငျးဖွဈပွီး ခွစှေမျး၊ စိတျဓာတျကလညျး မာကြောမှုအပွညျ့ပါပဲ။ တိုကျစဈက ဝါရငျ့ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ မားကပျဈဘတျဂျ Marcus Berg ၊ တှိုငျဗိုနနျ Toivonen တို့ဟာ ပွိုငျဘကျခံစဈကို ဒုက်ခပေးနိုငျသူတှဖွေဈပွီး ကှငျးလယျနဲ့ နောကျတနျးမှာလညျး ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိပါတယျ။ ဘရာဇီးလျ၊ ဆားဘီးယား၊ ကျောစတာရီကာတို့လို အသငျးတှနေဲ့ အုပျစုကပျြထဲကရြောကျခဲ့ပွီး ဒီအဆငျ့အထိရောကျလာတဲ့ ဆှဈဇာလနျအသငျးကိုလညျး အထငျသေးလို့မရပါဘူး။ အုပျစုတှငျးမှာ ဘရာဇီးလျလိုအသငျးမြိုးကို သရကေစားနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါမဈ Drmic ၊ ရှာကီရီ Shaqiri ၊ ခြာကာ Xhaka တို့လို ကစားသမားတှအေပွငျ ဒီဇီမယျလီ Džemaili ၊ ဘရာမီ Behrami စတဲ့ ဝါရငျ့ကစားသမားတှလေညျးရှိပါတယျ။ နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှု၊ ခွစှေမျးပိုငျးက ကှာခွားခကျြမရှိလို့ အနိုငျ၊အရှုံးခနျ့မှနျးဖို့ ခကျတယျ။ မိနဈ(၉၀)အတှငျး အဖွပေျေါဖို့ မရှိဘဲ အခြိနျပို၊ ပယျနယျတီအထိရောကျသှားနိုငျပွီး စိတျကွိုကျအသငျးဆိုရငျတော့ ဆှဈဇာလနျကိုပဲ ကွိုကျတယျ။
ကိုလံဘီယာ နှငျ့ အင်ျဂလနျ (၄-၇-၂၀၁၈ နံနကျ ၁၂း၃၀)
အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ဒီနှဈကမ်ဘာ့ဖလားခွစှေမျးက အားရစရာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အုပျစုတှငျးမှာ ဘယျလျဂြီယံတဈသငျးသာ ပွိုငျဘကျကောငျးပါလို့ အခုပှဲက အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးအစဈအမှနျကို စမျးသပျမယျ့ပှဲလို့ ဆိုရမယျ။ ကိုလံဘီယာအသငျးကတော့ အုပျစုတှငျးမှာ ဂပြနျကို မထငျမှတျဘဲ ရှုံးခဲ့တာကလှဲလို့ ကနျြတဲ့နှဈပှဲမှာ ပုံမှနျခွစှေမျးပွသနိုငျခဲ့ပွီး ပိုလနျ၊ ဆီနီဂေါတို့ကို အနိုငျကစားခဲ့တယျ။ အင်ျဂလနျနဲ့ ကိုလံဘီယာအသငျးတို့ဟာ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက အုပျစုတှငျးမှာ ဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး အင်ျဂလနျက (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ဒီနှဈသငျး (၁၃)နှဈအကွာမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ပွနျတှတေ့ာဖွဈပွီး နောကျဆုံးရငျဆိုငျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခွစေမျးပှဲတုနျးကလညျး အင်ျဂလနျအသငျးကပဲ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တာပါ။ စုစုပေါငျးဆုံတှခေဲ့တဲ့(၅)ကွိမျမှာ အင်ျဂလနျအသငျးက (၃)ပှဲနိုငျ၊ (၂)ပှဲသရကေခြဲ့ပွီး Head To Head မှတျတမျးမှာတော့ အပွတျအသတျ အသာယူထားတယျ။ ဒီနှဈသငျးဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ပှဲတှကေ ခွစှေမျးကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ သိသိသာသာ ကှာခွားခကျြမရှိဘူး။ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုမှာလညျး ဘကျညီတယျလို့ဆိုရမယျ။ အရငျတုနျးက အင်ျဂလနျအသငျးလို နာမညျကွီးကစားသမားတှနေဲ့ တဈဦးကောငျးကစားတာမြိုး မဟုတျဘဲ လူငယျကစားသမားတှကေို အခွခေံပွီး Team Work ကို ဦးစားပေးထားတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး ကှာတားဖိုငျနယျကို တကျရောကျသှားမယျလို့ ထငျမိတယျ။